केपी ओलीको भन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सकिएन भने राजनीतिबाट स’न्यास लिन्छुँ : विरोध खतिवडा - Nepali in Australia
काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रभावशाली नेता विरोध खतिवडाले अब आउने चु’नावमा केपी शर्मा ओलीको भन्दा आफ्नो पार्टी ठूलो हुने दावी गरेका छन्।
खतिवडाले ओलीले झापामा चुनाव हार्ने ड’रले राप्रपासँग गठबन्धन गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘जो मान्छेले झापाको एउटा सिट छोडेर राप्रपाको १५ हजार मत थपेर चुनाव जितेर आयो, त्यो मान्छेले आज यत्रो फुर्ती ? न माधव नेपालले राप्रपासँग एकता गरे, न विरोध खतिवडाले गर्यो ?
न रामकुमारी झाँक्रीले गर्नुभयो ? २०६४ सालमा केपी ओली, झापाको दमकमा पाखामा भ्यागुतो पछारिएर उत्तानो टाङ लागेको मान्छे, सबैभन्दा लोकप्रिय र राष्ट्रवादी नेता उ’त्तानो टाङ, तर मैले त २०४८ सालदेखि लगातार चुनाव जितिरहेको छु। अबको चुनावमा पनि मलाई फलामको चिउरा हुँदैन।’